SEENAA Y.G (2005) kutaa 4ffaa fi xumuraa.
Mata Duree “WAREEGAMA HANQISUUF WAL-TUMSUUN MURTEESSAADHA”! jedhu jalatti, yaada bal’aa kutaa 3n kaasuu yaaleera. Yaadoonni kun irra jireessa, waan haaraa osoo hin taanee, qalbii Dhala Oromoo hundaa keessa kan jiruudha. Tumsi ani baanuus, kan hundi keenya keessa keenyatti hawwiinu, garuu , Hawwuu qofti furmaata akka hin taaneellee hubannu, har’a borii odoo jennuu wareegama Ummata keenyaa akka ida’aa deemuuf, odoo beeknuu carraa kennaa jiraachuu keenya yaadachiisuufi. Rakkoo keessa keenyatti arginu hundaaf Qorichi isaa, harkuma keenya keessa jira. Qorichi Tokkummaa ykn Wal-Tumsuu deebifnee of gaafaachaa fi wal gaafachaa jirru kanaaf kan ta’u, Ulaagaa WAL-TUMSUU YKN TOKKOOMUUN barbaaddu guutanii argamuudha. Inni lammaffaa Ulaagaa kana dhugeessuuf “HAWWII” keessaa ba’anii hojiin mul’achuuf murteeffachuudha.
Waanuma Umamaan Ummati keenya qabu , warri abshaalli totolchanii deebisanii nu barsiisanii akka ittiin eebbifamnee hafnu ykn waanuma akka dhuunfaatti qabnu fakkeessanii ofittummaan nu gaadi’an malee, TUMSA kabajaa qabu fi hiikkaa quubsaa qabu, Aadaa Umama Oromoo keessaa qabna. Waan Waliin umamne deebisnee barbaadaa akka jirru hubachuu dhabuu keenyatu, habjuu hawwii keessa nu gangalchaa jiraata. Nuutis sababaa ofittummaa irraa maddaniin, Tumsa Umamaa qabnu qorannaadhaan achi fageessaa jirra.warra wal Tumsee Bilisoome ilaallee ykn warra waliif dhaabbatee sagalee isaanii addunyaatti dhageesifatan TVn ilaallee “Oromoon akkas odoo godhee” jennee, hawwiin of dhukkubsina. Garaagarummaan isaan waliin qabnu garuu , hojiin mul’isuu ykn argisiisuu irratti qofaadha. Waan amma har’aatti gaggeeffame fi gaggeeffamaa jiru bishaan itti naquu miti. sadarkaa irra jirru irraa dachaan hojjachuutu Wareegama keenya hanqisuu danda’aatti amanu irraati.
Wal-Tumsuuf Biyya keessattis ta’uu, Biyya alaatti dabalataan Aadaa jireenyaa, Umama keenyaan wal hin fudhannee keessaa ba’uun dirqama. Aadaa keessa keenyaa sirbee fira nu jibbisiisuu, diinaan Gaashee jedhee, dhiiga ofii arrabsuuf lafa ciruu, of keessaa odoo hin baafnee, waa’ee wal tumsuu haasa’uun hin danda’amu. Wal-tumsuun waan faallaa Oromummaa ta’an irraa fagaachuu gaafata. Warra kana hunda irraa fagaateetu Biyya keessaa fi alatti waliif birmachaa jira. Warra gufuu wal Tumsuu of keessaa buqqiseetu, kan kaleessaa irraa barannee jedhanii bakka hundaa wal waamaa jiran. Wal-tumsuun Oromoo ta’uu qofaa fi Bilisummaa Ummata Oromoo irratti amanuu qofaan Ummachuun ni danda’ama. Dhimma Oromoo irratti eessattillee waliin dhaabbachuun Wal-tumsuun ni danda’ama. Tokkoomuun waan hundaan tokko ta’uu kan jedhu of keessaa qaba. waa xiqqoon tokkummaa kana faalleessuu dandeessi.Wal-Tumsuun garuu, waan Ummata isaaniif yaadan galmaan ga’uuf waan waliin hojjachuu danda’an ifatti keewwatanii waliin akka tarkaanfataniif carraa bal’aa qaba.
Ilaalchaan adda ta’anii dhimma Ummata ofii irratti wal tumsuun ni danda’ama. Kaayyoo barruu kanaa kana qabsiisuufi. kun yoo xiqqaate diinaaf karaa saaquu fi diinatti wal kennuu dhaabu ni danda’a.yaada bal’aa qabaannee akka wal dhageenyuf nu gargaara. Adeemsa kanatti takkaa seennaan, waa hedduun walitti hidhachuu , waliif birmachuu, waliif iyyuu , waliin dhukaasuun ni danda’ama. Akkamiin wal tumsinaa ? kan jedhu dirree kana irratti tarrisuun rakkisaadha. Akkamiin ummachuu dandeenyaa ? kaa jedhus akkasuma. Dirree dhorkaa hin qabne waan ta’eef.
Wareegama Hanqisuuf, WAL-TUMSUU yerootu nu gaafataa jechuun haalli addunyaan itti jirtu illee tilmaama keessa galchuu irraa ta’uu haa qalbifannu. Biyyoonni dhihaa Qabsoo keenyaaf ilaalchi qaban beekamaadha. Ajandaan Bilisummaa jedhu kun Biyya diigutti fudhatamee wayyaaneef umurii dheeraffanaa ta’eera. Har’a garuu addunyaan achi hin jirtu. Hamaazuu Galmee Teerarstii keessaa ba’aa jira. Kanaaf ammoo sochiin ISIS qooda qaba. warri dhihaa Abbaa Biyyuummaa warra Filitsixeem fudhachaa jiru. warri dhihaa adeemsa isaanii keessa deebi’anii of ilaalu irratti hojjachaa jiraachuus dhaga’amaa jira. Kanaaf kan Tokkoomuuf murteeffate Tokkoomee, Ilaalcha qabuun wal kabajee dhimma Ummata isaa irratti kan wal Tumsu wal tumsee Sagalee keenya yeroo mijataa kanatti haa dhageesifnu. !! hammeenya wayyaanee haa saaxillu. Kan hafe akka itti guuttanii, sochii Bara 2014 dachaan guddatee, Bara 2015 tti hanqinoota keenya akka furannu abdiin qaba. Wareegama keenya hanqisuuf dhalli OROMOO Qabsoo Ummati isaa gaggeessaa jiruuf waardiyyaa haa dhaabbatu. Humna tokko walii galatti dadhabsuuf, Nama dhuunfaa tokko dadhabsuun eegala. Humna Gubbaa irraa ajaju gadi buusuuf, humna inni irra taa’ee jalaa dhabamsiisuun fala. Kanaaf Daa’imma wayyaanee, illee bira hin dabriinaa, Abbaa kee nu irraa gorsii jedhaanii . Dacheen Oromiyaa miila wayyaanee of irra dhaabuu akka dadhabde haa dubbattu.Hawwuu keessaa baanee, sochii qabsoo Addunyaan Bilisummaa itti goonfatee jiraatutti haa tarkaanfannu!! HORAA BULAA !!!!!